I-Agro Space: umhlahlandlela wezolimo wabakhiqizi bezolimo - umagazini i- "Potato System"
Esigabeni esithi "Indaba Yempumelelo", ingosi ye-Intanethi yomagazini i- "Potato System" ngokwesiko ishicilela izinto eziphathelene namabhizinisi imisebenzi yawo ihlobene nokukhula kwamazambane. Kepha namhlanje sifuna ukukhulisa ububanzi futhi sikhulume ngephrojekthi ye-agrarian ye-Intanethi yomhlaba eyenziwe yimizamo ehlangene yezinkampani ezivela eKyrgyzstan naseTajikistan.
Kuzoba mayelana Ipulatifomu ye-Agro Space IT.
Lokhu kungumsebenzi ohlanganyelwe wezinkampani i-AgroInformAsia (Kyrgyzstan), iNeksigol Navovar (Tajikistan) kanye nenhlangano yomphakathi iNeksigol Mushovir (Tajikistan).
I-AgroInformAsia iyinkampani yolwazi nebonisanayo egxile ekwakhiweni kwamathuluzi we-IT wokuthuthukisa ukuxhumana kwe-B2B, enikeza imininingwane yokwenza izinqumo eziphumelelayo, ukuphathwa kolwazi kanye nokubonisana okukude.
INexigol Navovar yinkampani egxile ekwakhiweni kwamathuluzi e-IT kwezolimo nakweminye imikhakha yezomnotho.
INexigol Mushovir yinhlangano eluleka ngezolimo njalo ngonyaka esiza inqwaba yamabhizinisi amancane naphakathi naphakathi kwezolimo kanye nezinkulungwane zabalimi eTajikistan bethula ubuchwepheshe obusha ekukhiqizeni, ekusetshenzisweni nasekukhangisweni kwemikhiqizo yezolimo, kuthuthukisa ikhwalithi yezimpahla futhi kuzuzwe nokukhula kwenzuzo.
Izinkampani phambilini bezinolwazi ngokusebenzisana: kusukela ngonyaka we-2015, ngokuhlanganyela bakhiqize amathuluzi ahlukahlukene e-IT futhi bawaphakamisa phakathi kwabasebenzisi abavela eKyrgyzstan naseTajikistan.
Ku-2019, bakhe ipulatifomu ye-Agro Space IT.
Le nkundla ihloselwe wonke umuntu obambe iqhaza ebhizinisini lezolimo, kubandakanya uhulumeni, izinhlangano zesayensi nezokubonisana; ezentuthuko kwezolimo kanye nasemakhaya.
Ipulatifomu iveza amathuluzi ahlukahlukene e-IT, ukusetshenziswa kwawo kukuvumela ukuthi wenze izinqumo eziphumelelayo zokuphatha ibhizinisi lezolimo (kungakhathalekile ukuthi kukhona umkhakha othile).
Ingosi ine-interface ngesiNgisi, isiKyrgyz, isiRashiya nesiTajik.
Ngonyaka wokuvulwa kwawo, ipulatifomu ye-Agro Space isayine imemorandamu yokubambisana ne-Russian Autonomous Non-Profit Organisation "Competence Center for Digitalization of the Agro-Industrial Complex" (Tambov).
Ipulatifomu ye-Agro Space IT inqobe indawo yesibili emncintiswaneni wamazwe omhlaba wamaphrojekthi amasha "Amapulatifomu e-Eurasian edijithali ka-2019", ahlelwe yiKhomishini Yezomnotho yase-Eurasian. Emncintiswaneni, ipulatifomu yethule ithuluzi le-E-Agro Map.
I-E-Agro Map imephu yomlimi we-elekthronikhi ekuvumela ukuthi unqume imingcele yezinsimu, uhlole amathuba okutshala izitshalo ezingama-33, wakhe izixhumanisi nezinkampani ezisebenzayo nezokuhweba. Iphrojekthi isiza ekwandiseni izinqumo ezenziwe (isiza ukunciphisa ubungozi, izindleko zokukhiqiza nezokuthutha, njll.).
Manje imizamo yabathuthukisi beplatifomu ihlose ukuthuthukisa amathuluzi alethwe kusayithi nokuwakhuthaza ezingeni lomhlaba jikelele. Izinkampani eziningi zikahulumeni nezizimele zikhombisa intshisekelo yokubambisana ne-Agro Space.
Ipulatifomu inikeza ukufinyelela kwezicelo ezingama-mobile ezingama-17 ezisiza ukusungula ukukhiqizwa okusebenzayo kwemikhiqizo ehlukahlukene yezolimo; kukhona ibhodi lezaziso ngogesi; kunomtapo wolwazi we-elekthronikhi, uvuselelwa njalo ngezinto zokuqeqesha ezintsha nolwazi.
Abavakashi be-Portal bangasebenzisa amamephu we-elekthronikhi anolwazi ngokukhiqizwa kwezilimo ezingama-50 + esikhathini sika-2012-2019 ezingeni lesifunda; amavidiyo afundisayo nafundisayo.
Ipulatifomu inikezela ngolwazi olusesikhathini samanani entengo emakethe yokuthengisa yemikhiqizo yezolimo eTajikistan naseKyrgyzstan; kusungulwe ama-calculator aku-inthanethi akuvumela ukuthi ubale inani lembewu, umanyolo namanzi lapho utshala izinhlobo eziningana zemifino.
Ngo-Okthoba 2020, cishe abasebenzisi abayisigidi abavela emazweni angama-40 + emhlabeni basebenzise amandla wesikhulumi. Mhlawumbe lo mthombo https://agro-asia.com/ru izoba wusizo nakuwe?
Tags: ISIKHALA SEZOLIMO